iHelp 2 - GPS Tracking Keychain, tantera-drano, tsy misy fihetsiketsehana ary fahitana ny fahalavoana (Zokiolona miaraka amin'ny Dementia) - OMG Solutions
iHelp 2 - GPS Tracking Keychain, Waterproof, Motionless & fall detection (Zokiolona miaraka amin'ny Dementia)
iHelp 2.0 Fitaovana GPS Tracker olon-dehibe afaka manara-maso ny satan'ireo zokiolona amin'ny fotoana ilana azy, rehefa misy ny fahalavoana, manampy aho dia afaka manosika SMS avy hatrany ary miantso ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana 5, mba hahafahana manome fanampiana avy hatrany.
The iHelp 2.0 Fitaovana GPS Tracker olon-dehibe manampy ireo fianakaviana sy ny fijalian'ny zokiolona amin'ny olana mifandraika amin'ny fahatsiarovana. Raha manana ray aman-dreny na olona ao amin'ny fianakavianao ianao izay mampiseho lamina mifanaraka amin'ny fitondran-tena manadino, na mety hiteraka fiainana mahaleotena, iHelp 2.0 Fitaovana GPS Tracker olon-dehibe dia hahatonga ny fiainanao ho mora kokoa ary tsy dia mitebiteby. iHelp 2.0 dia tena sarobidy satria hampitandrina anao na hanoratra raha olon-dehibe iray:
Raha mahatsiaro tena ny zokiolona, ​​dia afaka manery ny Call Button izy mandritra ny telo segondra mba hiantso ny antso an-telefaona. iHelp 2.0 Fitaovana GPS Tracker olon-dehibe dia mandefa SMS avy amin'ny tamba-jotra Wireless. iHelp 2.0 is small, elegant and portable. Mpanolo-tena akaiky ho an'ny zokiolona izany.
iHelp 2.0 - Fitaovana Tracker GPS an'ny olon-dehibe
Loko 4 - Mora azo apetraka / tsotra & azo ampiharina
Homena tranokala fanaraha-maso APP & Web Smartphone. Azonao atao ny manamarina ny toerana misy ny fitaovanao (làlana manan-tantara / ora tena izy) amin'ny alàlan'ny fampiasana ny PC, Tablet na Smartphone.
2G matetika: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
3G matetika: UMTS / HSPA (850/900/1900 / 2100Mhz)
GPS Fahasamihafana: -163 dBm
Frequency WIFI: 802.11 b / g / n, 2.4G
Connectors: 4 Pin - Magnet ho an'ny famahanana
Mikrophone sy mpandahateny: Naorina-in
Antenna: Namboarina seramika vita amin'ny seramika sy FPC
Slot Card SIM: Nano Sim-karatra
Fiatrehana herinaratra: 5V DC
Temperature: Fandraisana andraikitra: - 20 ° C ka + 65 ° C; Fepetra fitehirizana: - 30 ° C ka + 60 ° C
Hiankohonana: 5% - 95% (Non-condensing)
Fanombohana mafana: Tokony ho 1s
Fanombohana mafana: Tokony ho 2s
Manomboka mangatsiaka: Tokony ho 25s
Tsy tantera-drano: IP66
iHelp 2.0 - GPS keychain antitra antitra - taratasy fanamarinana
24764 Total Views 5 Views Today